Halista Iyo Raad-Reebka Daran Ee Caabuqa Coronavirus : W/Q :Jamal A. Muse |
Halista Iyo Raad-Reebka Daran Ee Caabuqa Coronavirus : W/Q :Jamal A. Muse
Hindhiso ku dhalad “Droplet”,
Taabasho ku faaf “Direct Contact”.
Duuf/Biyo Sanka ka yimaadda “Runny nose”,
Cuna-xanuun daran “Sore Throat”,
Caabuq-dhageedka Carruurta ” Middle Ear Infections in children,
Wadne Xanuun “Heart Disease”, gaar ahaan dadka waaweyn,
Naafeynta Hab-Dhiska Difaaca bukaanka ” Weakened Immune Systems”.
Sameynta Baadhista Duufka ama Biyaha sanka bukaanka ka yimaadda,
Sameynta Baadhista Malaxda cunaha,
Cabbitaanka Biyaha iyo Sharaabka,
Daawooyinka Xummad Jebinta “Take over-the-counter medicine” gaar ahaan bukaannada lagu arko cuna-xanuun daran “Sore Throat”,iyo xummad “Fever”. Waxa la siin karaa Aspirin, Ibuprofen ama Acetaminophen. Balse Aspirin lama siin karocarruurta iyo dadka da’doodu ka yar tahay 19 jir.
Maydhista Gacmaha oo loo ade3gsanayo isticmaalka Saabuunta, biyaha kulul, iyo nadiifiyaha Alcohol.
Faro iyo gacan ka ilaalinta Indhaha, Sanka iyo Afka.
Ka Fogaanta Taabashada Ruux Kale, gaar ahaan dadka looga shikisan yahay asiibka xanuunka Coronavirus.
U daaweynta hannaan la mid ah hab-daaweynta durayga.
Adkeynta Nadaafadda degsiimada “Environmental cleaning”.